Archives Fiainana - SmartMe
Smart ray aman-dreny
Dom » Archive araka ny sokajy "Fiainana"
Vakio bebe kokoa
Mi Watch Lite - famantaranandro mitovy amin'ny SmartBand
11 Aprily 2021
tarika mahay, famantaranandro marani-tsaina, mi band 5, jereo aho, mi mijery lite, bandy mahay, manan-tsaina fiambenana, xiaomi
Mi Watch Lite dia tonga tao amintsika fotoana lasa izay. Io dia, ary mbola misy ihany, ny smartwatch voalohany misy ny marika Xiaomi ao amin'ny fianakavianay. Nosoloiny ny Mi Band 5, tarika Xiaomi farany. Ahoana...
Oclean X Pro Elite - mangina, mahomby kokoa ary mahafinaritra kokoa. Ny borosy nify sonika tsara indrindra eny an-tsena
8 Aprily 2021
oclean, oclean x, Oclean X Pro Elite, Oclean X Pro Elite Super Smart Electric borosy nify, Oclean Xpro Elite, Oclean Xpro Elite Super Smart Electric borosy nify, Super Smart, sonic nify
Oclean dia nanao indray. Manana Oclean X Pro izay tena faly aho, ary tsy nanantena zavatra hafa avy amin'ny borosy nify sonika. Na izany aza, rehefa misy safidy hijerena ny kinova manaraka, Oclean X Pro ...
Lifestyle, hevitra, Unboxing
FEIYUTECH Vlog Pocket 2 - famerenana gimbal
4 Aprily 2021
Android, FEIYUTECH, FEIYUTECH Vlog Pocket 2, gimbal, iOS, iPhone, finday avo lenta
Tsy dia fantatro loatra ny momba ny sary, fa hatramin'ny nanombohako nanoratra famerenana sy firaketana kely dia hitako fa nila zavatra izay hanampy ahy hitazona ny telefaona amin'ny toerana mahazatra sy hampihena kely ny vokatry ny tanana mihozongozona kely. Notadiaviko ...
KiCA Masażer - Zavatra mety hahasoa ny rehetra
29 Martsa 2021
Ny massager KiCA dia vokatra ahafahantsika miala sasatra ny hozantsika. Iza no hahasoa azy? Saika ny olona rehetra! Fotoana famerenana!
Ny première an'ny e-scooter FIAT F500 F10 CROSS misy kodiarana mahagaga
27 Martsa 2021
fiat 500, scooter, scooter elektrika
Ny scooter elektrika FIAT 500 ao amin'ny kinova CROSS dia kinova vaovao amin'ilay maodely F500 F10 voaporofo sy malaza ankehitriny. Tsy toy ny maodely fototra, manana kodiarana 10-inch misy kodiarana 2,5 santimetatra izy, izay vita amin'ny teknolojia "tantely tantely", ...
Ny premiere an'ny kinova manerantany an'ny Honor Band 6. Fantatray ny vidiny
Navoakan'i	Paweł M.
voninahitra, tarika fanomezam-boninahitra, tarika fanomezam-boninahitra 6, smartband
Ny marika sinoa dia nanambara ny fanombohana ny tarika mahatalanjona Honor Band 6. eo amin'ny tsena manerantany. Ny fanolorana ireo fitaovana dia natao tamin'ny volana novambra tamin'ny taon-dasa, saingy tamin'ny fomba ofisialy dia tao amin'ny Fanjakana Afovoany ihany no nividianana azy. Ny tarika smart vaovao dia mampiavaka ny ...
iHealth Fit - Fanaraha-maso mavesatra Smart nataon'i iHealth
25 Martsa 2021
Herintaona nipetrahana tao an-trano. Asa lavitra, fialamboly amin'ny endrika Netflix ary fihinanana sakafo atoandro eo amin'ny sofa. Vokany? Mora vinavina‼ Izay no antony ilanao manova zavatra amin'ny fiainanao! Nanomboka tamin'ny lanjako aho ary nandinika ny iHealth Fit androany!
Apple Watch miaraka amin'ny efijery miovaova? Fa nahoana no tsy!
paoma, apple watch, patanty, manan-tsaina fiambenana
Araka ny tatitra farany sy ny fampiharana patanty, Apple dia mandinika ny mety hisian'ny fiovana mahery vaika amin'ny fisehoan'ny famantaranandrony marani-tsaina. Ny revolisiona dia tokony hampidirina, ankoatry ny zavatra hafa, ny fanovana ny endrika valopy ary ny fampidirana efijery malefaka. Macrumors dia nanambara fa nilaza i Apple fa mety ...
POCO dia mandefa telefaona voalohany
Omaly dia natolotra ny smartphone POCO vaovao - POCO F3 sy POCO X3 Pro. Ampitaina amin'ny processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G Mobile Platform, ny POCO F3 dia manana AMOLED E6,67 DotDisplay 4-inch miaraka amin'ny tahan'ny havaozina hatramin'ny 120 ...
Lifestyle, hevitra, Vehivavy Smart
Xiaomi inFace ION Hairbrush ZH-10D - famerenana borosy volo
inface, mandroso mahitsy, xiaomi, Xiaomi dia mihombo, Xiaomi inFace ION borosy
Androany aho hanolotra anao famerenana iray hafa momba ny vokatra hatsarana. Amin'ity indray mitoraka ity dia ho borosy volo Xiaomi inFace ION Hairbrush ZH-10D. Ity no fitaovana fikarakarana volo voalohany notsapaiko. Volo volo Xiaomi inFace ...
SmartMe no toerana itoeranao eo amin'ny tontolon'ny Smart. Vavahadin-tserasera teknolojia mamoaka vaovao farany, famerenana, torolàlana ary tsanganana avy amin'ny faritra misy vahaolana marani-tsaina. Orinasa iray izay mamolavola vahaolana Smart ho an'ny trano, trano, hotely, hopitaly ary maro hafa. Ny angon-drakitra momba ny vokatra Smart lehibe indrindra any Polonina. Mpanentana fomba fiainana mahay!
Jimmy JV85 Pro - Famerenana ny Robot Vacuum izay miondrika!
Apple dia hamonjy 861 arivo. medaly taonina amin'ny fivarotana finday finday tsy misy charger
Bang & Olufsen Beosound Mipoitra - mpandahateny manify sy kanto
Konferansa Apple amin'ny volana aprily - jereo ny toerana hijerena!
Aqara Hub avy any amin'i Xiaomi Mi Home
Mpanampy an'ny Google - fitaovana vaovao
Xiaomi Mpanampy trano
Mpanampy ao an-tokantrano - manampy fatratra Component
Xiaomi Home App - fanovana faritra
Xiaomi HomeKit mahay trano nataon'i Aqara
Smart Home vahaolana ho an'ny rehetra
Xiaomi Gateway 3 - Kitapom-pahaizana Xiaomi Smart Home Kit
© 2021 SmartMe. Zo rehetra voatokana
Mivadika mankany ambony
Teboka iray monja ianao raha tsy hiditra an'izao tontolo izao Smart
Misoratra anarana ao amin'ny fampahalalam-baovao ary mizaha ireo teknolojia sy fitaovana maoderina isan'andro hanamora ny fiainanao!
Efa namaky sy nanaiky ny fipetraky ny fampahalalana aho
Avelao hilalao ity saha ity raha olona ianao:
Zava-dehibe: mampiasa cookies izahay Mampiasa fampahalalana voatahiry amin'ny alàlan'ny cookies sy teknolojia mitovy izahay, anisan'izany ho an'ny tanjona dokam-barotra sy statistika ary hampifanaraka ny serivisy ho an'ny filan'ny tsirairay avy. Ireo dokambarotra, orinasa mpikaroka ary mpamatsy fampiharana multimedia dia afaka mampiasa azy ireo ihany koa. Ao amin'ny fandaharana efa nampiasaina amin'ny Internet dia azonao atao ny manova ny lisitry ny mofomamy. Ny fampiasana ny tranonkalantsika tsy manova ny filaharana amin'ny mofomamy dia midika fa ho voatahiry ao amin'ny fitadidiana ny fitaovana izany.